अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगै हिँड्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको कालो सुटकेस जसले पृथ्वी ध्वस्त पार्न सक्छ ! – Kavrepati
Home / Uncategorized / अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगै हिँड्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको कालो सुटकेस जसले पृथ्वी ध्वस्त पार्न सक्छ !
admin August 29, 2021	Uncategorized Leaveacomment 67 Views
यिनै हुन् ओमिक्रोनको डरले डाक्टरले ज्यान लिएको छोराछोरी र श्रीमती
अक्षय कुमार अभिनित ‘सुर्यवंशी’को १४ दिनको कमाई कति ?
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगै हिँड्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको कालो सुटकेसलाई ‘न्यूक्लियर फुटबलु’ भनिन्छ। यो सुटकेसभित्र एउटा स्विच हुन्छ, जो–थिच्ने बितिकै परमाणु ब म बि’स्फोट भइ पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ। तर कालो सुटकेस भित्रको स्विच थिच्ने अधिकार केवल अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई मात्र हुन्छ।
गत जनवरी २१ को दिन क्यापिटल हिल (संसद)मा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्प समर्थक हुल्लड़बाजहरूले आ,क्रमण गर्दा उक्त सुटकेस हुल्लड़बाजहरूको हातमा आइसकेको थियो। समाचार स्रोतका अनुसार त्यस समय उक्त कालो सुटकेस तत्कालीन राष्ट्रपति ट्र्म्पका उप–राष्ट्रपति माइक पेन्सले लिएर लुकेका थिए। उनी लुकेको करिब एकसय फिटसम्म हुल्लड़बाजहरू पुगे पनि भगवानको कृपाले कुनै दुर्घटना हुन पाएन। र, खतरा टर्‍यो।
एसिया टाइम्सले अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञहरूसँग गरेको कुराकानी अनुसार त्यो सुटकेस कुनै व्यक्तिले पाएपनि स्विच भने थिच्न सक्दैन। किनकी स्विच थिच्नुअघि तीन किसिमको ‘लन्च कोडु अर्थात् पासवर्ड थिच्नुपर्छ। जो– अरु कसैसँग हुने कूरै भएन। यदि कालो सुटकेस अन्य कसैको हातमा पुर्‍याइँ टुटाउने–फुटाउने गर्‍यो भने ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
क्यापिटल हिल आ,क्रमणको घटनापछि ‘न्यूक्लियर फुटबलु’ को नामले परिचित कालो सुटकेस अतिरिक्त सुरक्षाको लागि अमेरिकी रक्षा विभाग (पेण्टागन)ले विशेष योजना बनाएको छ। विभागले यस बारे सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ।
कम्तिमा २० किलो तौल भएको कालो सुटकेस राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपति सँग पनि हुन्छ। तर उप–राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति असमर्थ भएको सन्दर्भमा मात्रै यसको स्विच थिच्न सक्छन्। सुटकेसभित्र एउटा सानो कार्ड हुन्छ। कार्डमा सबै लन्च कोड लेखिएको हुन्छ तर त्यो लन्च कोड हेर्नको लागि भने छुट्टै पासवर्ड थिच्नु पर्छ। सुटकेसको भित्र एन्टेनासहितको सञ्चार उपकरण राखिएको हुन्छ। त्यसबाट राष्ट्रपतिले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो देशमा सम्पर्क गर्न सक्छन्।
कालो सुटकेसमा रहेको स्विच थिच्ने बितिकै, यसको खबर सेनालाई जान्छ। र, सेनाले राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार परमाणु ब,म बि’स्फोट गराउँछ। यधपि, यु’द्धको निर्णय लिने अधिकार अमेरिकी संसदसँग हुन्छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘भिटो’प्रयोग गरेर मात्र यु,द्धको आदेश दिने हो।
हालसम्म अमेरिकी संसदको आदेशमा पाँचपटक र राष्ट्रपतिको भिटोमा एक सय २० पटक यु’द्धको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपतिको अत्यन्तै निकटलाई मात्रै सुटकेसको जिम्मा दिएको हुन्छ। चौबिसै घण्टा कालो सुटकेस राष्ट्रपतिको नजिकै हुन्छ। यस्तो परमाणु ब,म जापानको हिरोशिमामा बि,स्फो’ट भएको ब,म भन्दा १७ हजार गुणा ठूलो शक्तिशाली हुन्छ।
अब कल्पना गर्नुस्, यदि यो ब,म बि,स्फो’ट भयो भने संसारको अवस्था कस्तो हुन्छ होलार? विज्ञहरू भन्छन्– मानव जीवनको अस्तित्व नै मेटिने छ। सुटकेसभित्र ६ हजार एक सय ८५ परमाणु ब,म भएको अनुमान गरिन्छ। एक हजार तीन सय ६५ सतहदेखि प्रहार गर्न सक्ने अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) हरू रहेका छन्।
कसैगरी परमाणु ब,म बि’स्फो,ट गर्ने समय आयो भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले ुगो कोडु नामक अन्तिम स्विच थिच्नेछन्, जसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले एकपटक बि,स्फो’टको आदेश दिएपछि रोक्न सकिदैन। यदि, परमाणु ब,म बि,स्फो’ट भयो–भने पृथ्वीका कुनैपनि प्राणी जीवित रहन सक्दैनन्।
Previous त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र महिलासँग घुस मागेपछि असई र जवानको जागिर चैट
Next ‘फेसबुक र टीकटकमा झुन्डिएर बस्नुभन्दा डीम्याट खोलेर आइपीओ भर्नू : एसपी होबिन्द्र बोगटी
केहीबेर अघि २४ प्रहरी सवार ट्रकको ब्रेक फेल भै भयो दुर्घटना
उदयपुर : जिल्ला प्रहरी कार्यालय गाईघाट आउँदै गरको प्रहरीको बा१ग २१६८ नम्बरको वान टन ट्रक …